Abantu abaningi bangakwazi ukushayela isikhathi eside emotweni yabo, ngaphandle kokucabanga ngento efana nesihlungi salon, futhi emva kokubaluleke kakhulu futhi kuyadingeka. Futhi uma kukhona iphunga elimnandi, akunakwenzeka ukuphefumula egumbini, abantu baqala ukuzibuza ukuthi kungani lokhu kwenzeka ngempela. Eqinisweni, isizathu siseqiniso lokuthi isihlungi sakho salon sivuliwe, futhi awuzange usishintshe ngesikhathi. Ngakho bonke abashayeli akufanele bakhohlwe mayelana nokuhlunga kwe-salon kanye nesidingo sokushintshwa kwesikhashana. Kuphela kwezinye izimoto kungenziwa kalula futhi ngokushesha, futhi kwabanye kungatholakali ngendlela ephumelela kakhulu, ngakho ukufika kuso kunzima kakhulu. Isibonelo, ukufakwa kwesihlungi se-salon "Nissan Kashkay" kubashayeli abaningi kunzima.
Okokuqala, kubalulekile ukuqonda ukuthi isihlungi se-Nissan Cascay salon kufanele sithathwe kanjani. Abashayeli bafuna ukuthola impendulo eqondile kulo mbuzo, kodwa lokhu akunakwenzeka, ngoba kuncike kakhulu ezimweni okufanele uhambe ngazo. Uma umoya ugcwele uthuli, ingaphakathi lilokhu lithola ukungcola okuncane, okungavala isikrini. Khona-ke udinga ukwenza indawo ngokuphindaphindiwe kaningi kunokuthi ushayela endaweni lapho umoya uhlanzekile ngokuphelele. Kodwa uma udinga izibalo eziqondile, kufanele ubheke kubhukwana olunikezwa le moto. Ithi ukushintshwa kwesihlungi se-cabin "Nissan Kashkay" kufanele kwenziwe okungenani zonke amakhilomitha ayizinkulungwane ezingamashumi amathathu. Kodwa-ke, usadinga ukunamathela ekubuseni, okusho ukuthi izihlungi ze-salon kufanele zishintshwe okungenani kabili ngonyaka, kungakhathaliseki ukuthi imodeli yemoto noma izimo zokushayela.
Izimpawu zesidingo sokufaka esikhundleni
Kodwa wazi kanjani ukuthi udinga isihlungi sendawo yamakamelo "Nissan Kashkay"? Ngaphezu kokukhomba amakhilomitha ayizinkulungwane ezingamashumi amathathu namakhilomitha ayisithupha, kudingeka futhi uhlole isimo se-cabin ngesikhathi sangempela. Uma iphunga elimnandi livele, ngakho-ke kuphuthumayo ukwenza indawo esikhundleni, ngoba lokhu kuyisibonakaliso sokuthi isihlungi se-salon sesiye saba isikhunta. Uma le iphunga lingena salon, khona-ke ngeke ukwazi ukuyiqondisa. Futhi, kufanele uqaphele ukuthi izinhlelo zokupholisa nokufudumala zisebenza kanjani: uma amandla e-air conditioner esehlile, lokhu kungase kube uphawu lokuthi yisikhathi sokushintsha isihlungi. Kanti futhi, ngokuhlunga okwesikhumba, ukusetshenziswa kwephethiloli kuqala ukwanda, futhi uthuli olungena ngaphakathi lungahlali kuwo, kodwa luqhubeka luhamba emoyeni. Uma noma yikuphi kulezi zibonakaliso kuphawulwe maduze, kuzomele uhlole idivayisi yokuhlanza. Ngenhlanhla, ukufakwa kwesihlungi se-salon "Nissan Kashkay" ngezandla zabo kungenziwa ngumuntu wonke. Inkinga kuphela lapho ikhona khona.
Njengoba sekushiwo ngaphambili, ezinye izimoto zinezihlungi ze-cabin hhayi ezindaweni eziphumelele kakhulu. Lokhu kusebenza nalesi simo. Kungenxa yalokhu ukuthi ukufakwa kwesihlungi se-cabin "Nissan Qashqai" kuyinkimbinkimbi. Isithombe sendawo yakhe singabonakala ezincwadini ezikhethekile, kepha awudingi ukuchitha isikhathi kulo, ngoba ukuthola isihlungi akuyona inkinga enkulu kangaka. Kancane kancane ngakwesokunene kwe-gas pedal. Inkinga ukuguqula isihlungi ngaphandle kokukhipha ibhulogi.
Ngakho-ke, ukuze ususe isihlungi, udinga ukususa ikhava yepulasitiki, bese uvula i-windshield kuze kube sezingeni eliphezulu. Lokhu kuzophakamisa i-damper yangaphakathi kakhulu, ikunikeze ukufinyelela kweyunithi yokulawula, evimbela indlela eya kusihlungi. Khipha bese uqhaqhaza isihlungi esidala. Phuma futhi ulungiselele omusha ukuthi angene esikhundleni sakhe. Lapha udinga ukulifakela nge-accordion noma i-butterfly - njengoba kuyoba lula ukuyivumelanisa phakathi kwezinyawo, okungukuthi, ukwenza indawo ngaphandle kokukhipha ibhulogi. Bese ufaka isihlungi esisha, uqaphele umfanekiso wemicibisholo ekhombisa ukuqondisa kwomoya, bese uphinda inqubo ngokulandelana okulandelanayo. Yilokho konke - isihlungi se-salon sithathe indawo ngaphandle komzamo omkhulu.
Indlela esiphatha ngayo amakhala yisisu e ingane
Izidakamizwa Antifungal "Nystatin": imiyalelo, izinkomba, side effects